Siyaasiyiin badan oo ka falcelisay warqadii kasoo baxday Villa Somalia. | Warbaahinta Ayaamaha
Siyaasiyiin badan oo ka falcelisay warqadii kasoo baxday Villa Somalia.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Waxaa aad loo hadal hayaa warqad Madaxweynaha waqtigiisa dhammaday ee Farmaajo uu soo saaray oo lagu shaaciyey in awoodii Ra’iisul wasaare Rooble la hakiyey. taasoo lagu tilmaamay mic sharciga baalmarsan, maadaamaa madaxweynaha aan ku fadhin wax sharciyad ah.
Arrintaan ayaa aad looga hadal hayaa barasha bulshada, waxaana aad looga soo horjeestay warqadaas oo dad badan ay ku tilaameen mid aan shaqeyneyn.
Sidookale Duqii hore Muqdisho Taabit Cabdi ayaa yiri “Madaxweyne sharciyad ku jooga ayaanan laheyn awood dastuuri ah ee uu ku hakin karo ama xil iga qaadi karo Ra’iisul Wasaare, iskaba daayee isaga oo muddo xileedkiisii dhammaaday”
Dhanka kale madaxweynihii hore ee maaulka HirShabeele Ali Cosoble ayaa ka digay in dagaal horseedi karto waxyaabaha warqadaha uu soo saaro madaxweyne farmaajo.
Madaxweyne M A Farmaajo waxaan kugula talinayaa inaad ka joogo khaladaadka aad sameyneyso. Waxaad ku socotaa waddadii Mad Cabdullahi Yusuf (au) ee sababtay iney beesha caalamka soo farageliso arrimaha Soomaaliya, una aqoonsatay inuu caqabad ku yahay geeddi socodka nabadda (spoiler) ayadoo ka dalabtay inuu ka dego xilka (is casilo).
Sidoo kale baraha bulshada internetka ayaa aad looga hadal hayaa mowjadaan cusub ee soo korartay, waxaana dad badan aaminsan yihin in Madaxweyne Farmaajo uu kasoo horjeedo kiiska Ikraan Tahliil oo Ra’iisul wasaare Rooble balan ku qaaday in cid walbo oo ku lugyeelata kiiskaas maxkamad lasoo taagi doono.